Page7– MySansar
पछिल्लो पटक २०७६ सालमा निर्मल निवासमा लगाइएको टीकाको फोटो (माथि)। पोहोर पनि कोरोनाका कारण टीका लगाउने कार्यक्रम भएन। राजतन्त्रका समर्थकहरु अझै पनि ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ नारा निकै मायाले लगाउँछन्। तर पूर्व राजपरिवारले यसपालि आफ्ना समर्थकहरुलाई दशैँको टीका नलगाइदिने भएकोले निर्मल निवासमा यसपालि लाइन नलाग्ने भएको छ। असोज २२ गते नै सूचना निकालेर पूर्व राजा… Continue reading
‘स्क्विड गेम’ अर्थात् विद्रुप खेल अहिले एकदमै चर्चामा आएको सिरिज हो। यो कोरियन सिरिज नेटफ्लिक्सका रेकर्डहरु तोड्दै ग्लोबल सेन्सेन बनिरहेको छ। वर्ग असमानतालाई दर्शाउँदै ऋणमा डुबेका सयौँ खेलाडीहरु बच्चाहरुले खेल्ने ६ वटा खेल खेल्छन्। सबै खेल जितेमा ४५.६ बिलियन कोरियन वन जित्ने मौका हुन्छ। तर हारेमा… हारेमा सजायँ। खेलबाट बाहिरिने मात्र होइन, जीवनै सकिन्छ। हजुर,… Continue reading
पान्डोरा पेपर्सका खुलासाहरु रोचक भइरहेका छन्। बेलायतको गार्डियन र बीबीसी पानोरामाले गरेको एउटा संयुक्त अनुसन्धानमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको पार्टीलाई नै फन्डिङ गर्ने एक धनाढ्यको कुकृत्य खुलेका छन्। उज्बेकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपतिकी छोरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स लिन २२ करोड अमेरिकी डलर घुस खुवाउने कामको सल्लाह दिने यिनै रहेछन्। टेलिया नामको त्यो टेलिकम कम्पनीसित केही अघिसम्म नेपालको एनसेलको… Continue reading
पान्डोरा पेपर्स के हो ? यस्तो छ बच्चाले समेत बुझ्‍ने व्याख्या
अहिले विश्वभर हङ्गामा भइरहेको ‘पान्डोरा पेपर्स’ लिक के हो? रेड्डिटका एक प्रयोगकर्ता DanGliesack ले यसअघि पानामा पेपर्स सार्वजनिक हुँदा पाँच वर्षको बच्चाले पनि बुझ्ने गरी यो जटिल विषयको एउटा व्याख्या गरेका थिए, जसलाई मूलधारे मिडियाले समेत साभार गरे। उनकै व्याख्यालाई नेपाली परिवेशमा ढालेर भावानुवाद गरेको छु, शायद् यसले सजिलोसँग बुझाउन मद्दत गर्छ कि- रामबहादुरसँग एउटा… Continue reading
खोज पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइसीआइजेले ११७ वटा देशका १५० वटा मिडियाका ६ सयभन्दा बढी पत्रकारहरुको संयुक्त सहकार्यमा गरेको अनुसन्धानबाट भएका खुलासा आइतबार रातिदेखि पान्डोरा पेपर्स नाममा सार्वजनिक भएको छ। १४ वटा अफसोर सेवा प्रदायकका लिक भएका गोप्य रेकर्डहरुका आधारमा यो खोजमूलक रिपोर्टिङ गरिएको हो। विभिन्न देशका मिडियाले यो बारे रिपोर्टिङ प्रकाशन गरेका छन्। नेपालीहरुका बारेमा… Continue reading
अनलाइन सपिङको सामान्य र सर्वमान्य मान्यता के हो भने यो सस्तो हुन्छ। सस्तो हुनुपर्छ। यस्तो अनलाइन पसलमा अरु पसलहरुमा हुने खालका धेरै खर्च जोगिन्छन् भन्ने पनि तर्क एउटा हुनसक्छ। तर नेपालमा भने किन हो उल्टो हुन्छ अधिकांश समयमा। अहिले दराज अनलाइन सपिङमा दशैँ धमाका अफर चलिरहेको छ। भव्य विज्ञापन भइरहेको छ पत्रिका, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल… Continue reading
सबै आत्महत्या गलतै हुन्छ प्रचण्ड ज्यु, ‘ग्लोरिफाइ’ गर्नु ठीक भएन
“सुसाइड सबै नराम्रो मात्रै हुँदैन है साथीहरु,” अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले बिहीबार यसो भनेको समाचार पढ्दा अचम्म लाग्यो। आजभोलिको त समाचार पनि विश्वास गर्न लायक हुन्नन्। साँच्चै यसो भनेका हुन् कि भनाई बङ्ग्याएर समाचार आएको हो भन्ने पनि शंका लाग्यो। भिडियोमा प्रचण्डकै आवाज सुनेको त यसै भनेका… Continue reading
फेसबुक हेर्दै गर्दा साइबर ब्युरोको एउटा विज्ञप्तिमा आँखा गयो। एकै पटक चार जना युट्युबरलाई प्रहरीले अदालतको अनुमतिबाट पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको त्यसमा उल्लेख छ। ठ्याक्कै कुन घटनाको भिडियोका कारण हो भन्ने नखुले पनि विज्ञप्तिमा ‘पीडित महिलाको तस्विर सहित चरित्र हत्या हुने तथा इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुऱ्याई नीजप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने सामाग्रीहरु प्रसारण गरेको’ आरोप… Continue reading
कस्तो उल्टो काम : चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउने, काम चलाउने, अनि खारेज गर्ने
Posted on September 27, 2021 by Salokya
एउटा सरकारले झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएर पनि संसद छलेर अध्यादेशले शासन चलायो भनेर भएको विरोध बिर्सेकै छैन, त्यो सरकारलाई प्रतिस्थापन हुने गरी बनेको अर्को गठबन्धन सरकार पनि उस्तै अध्यादेशको उल्टो बाटोमा लागेको छ। चलिरहेको संसद हठात् अन्त्य गरी २० प्रतिशतले नै पार्टी फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी एमाले र जसपा… Continue reading